Iindaba - iimaski, ziqonde ngokwemigangatho
UKUGCINA UHLOBO MASK
IKOMITI UHLOBO MASK
ISICWANGCISO SOMLAWULI OPHELELEYO
Imbali yeMask Mask
Iimaski, ziqonde ngokwemigangatho
Okwangoku, umlo welizwe lonke wokulwa nenyumoniya ebangelwe yinoveli coronavirus. Njengomgca "wokuqala wokuzikhusela" wokukhusela ucoceko lomntu, kubaluleke kakhulu ukunxiba iimaski ezihlangabezana nemigangatho yokuthintela ubhubhane. Ukusuka kwi-N95, i-KN95 ukuya kwizigqubuthelo zonyango, abantu abaqhelekileyo banokuba neendawo ezingaboniyo ekukhetheni iimaski. Apha sishwankathela amanqaku olwazi kwicandelo eliqhelekileyo ukukunceda uqonde ukuqonda okuqhelekileyo kwemaski.
Yeyiphi imigangatho yemaski?
Okwangoku, eyona migangatho iphambili yase China kwiimaski ibandakanya i-GB 2626-2006 "Izixhobo zokuphefumla ezikhuselekileyo zokucoca uhlobo lokuphefumla", i-GB 19083-2010 "Iimfuno zobuchwephesha zokukhusela ezonyango", YY 0469-2004 "Iimfuno zobuchwephesha kwezonyango iimaski zoqhaqho ”, GB / T 32610-2016“ Ukucaciswa kwezobuchwephesha kwiiMaski zoKhuselo zeMihla ngemihla ”, njl.
I-GB 2626-2006 "Izixhobo zokuPhefumla ezikhuselayo zokuCoca iziQinisekiso zePilisi" yabhengezwa yi-General Administration yoLawulo lweMigangatho, ukuHlola nokuQinisa kunye neKomiti yoLawulo lweMigangatho kaZwelonke. Umgangatho onyanzelekileyo wokubhaliweyo okupheleleyo kwaye waphunyezwa ngoDisemba 1, 2006. Izinto zokhuselo ezichazwe kumgangatho zibandakanya zonke iintlobo zezinto, kubandakanya uthuli, umsi, inkungu kunye neentsholongwane. Ikwacacisa imveliso kunye nobuchwephesha bokubalula kwezixhobo zokuphefumla, kunye nezinto, ulwakhiwo, inkangeleko, ukusebenza, kunye nokusebenza kokuhluza iimaski zothuli (inqanaba lokumelana nothuli), ukumelana nokuphefumla, iindlela zokuvavanya, ukuchonga imveliso, ukupakisha, njl njl. iimfuno.
I-GB 19083-2010 "Iimfuno zobuGcisa zeMaski eziKhuselayo zoNyango" yabhengezwa yi-General Administration yoLawulo lweMigangatho, ukuHlola kunye nokuGcinwa kunye neKomiti yeSizwe yoLawulo lweMigangatho, kwaye yaphunyezwa ngo-Agasti 1, 2011. Lo mgangatho ucacisa iimfuno zobugcisa, uvavanyo iindlela, imiqondiso kunye nemiyalelo yokusetyenziswa kweemaski zokhuselo zonyango, kunye nokupakisha, ukuhambisa kunye nokugcina. Kukulungele ukusetyenziswa kwiindawo zokusebenza kwezonyango ukucoca amasuntswana emoyeni kunye namachaphaza ebhlokhi, igazi, ulwelo lomzimba, ukhuseleko, njl. I-4.10 yomgangatho uyacetyiswa, kwaye okuseleyo kunyanzelekile.
YY 0469-2004 "Iimfuno zobugcisa beMaski zoNyango zoNyango" yabhengezwa ngurhulumente ngokutya kunye noLawulo lweeDrug njengomgangatho kwishishini lamayeza kwaye yaphunyezwa ngoJanuwari 1, 2005. Lo mgangatho ucacisa iimfuno zobuchwephesha, iindlela zovavanyo, imiqondiso kunye nemiyalelo ukusetyenziswa, ukupakisha, ukuthuthwa kunye nokugcinwa kweemaski zonyango. Umgangatho uchaza ukuba ukusebenza kweebhaktiriya ekusebenzeni kweemaski akufuneki kube ngaphantsi kwe-95%.
I-GB / T 32610-2016 "Ukucaciswa kobuchwephesha beMaski yoKhuselo yemihla ngemihla" kukhutshwe yi-General Administration yangaphambili yoLawulo lweMigangatho, ukuHlolwa nokuGcinwa kunye neKomiti yoLawulo lweMigangatho kaZwelonke. Yimigangatho yam yokuqala yelizwe lam kwiimaski zokuzikhusela eluntwini kwaye yaphunyezwa ngo-Novemba 1, 2016. Umgangatho ubandakanya iimfuno zemaski, iimfuno zolwakhiwo, iimfuno zokuchongwa kwelebheli, iimfuno zokubonakala, njl. Iimpawu eziphambili zibandakanya izikhombisi ezisebenzayo, ukusebenza kakuhle kwezinto zokucoca ulwelo , Iimpawu zokuphefumla nezikhuthazayo, kunye nezikhombisi zokubambelela. Umgangatho ufuna ukuba iimaski zikwazi ukukhusela ngokukhuselekileyo nangokuqinileyo umlomo kunye nempumlo, kwaye akufuneki kubekho iikona ezibukhali kunye nemiphetho enokuchukumiseka. Inemigaqo eneenkcukacha malunga nezinto ezinokubangela ukwenzakala kwimizimba yabantu njenge-formaldehyde, idayi, kunye nezinto ezincinci ukuqinisekisa ukuba uluntu lunokuyinxiba. Ukhuseleko xa unxibe iimaski zokukhusela.
Zeziphi iimaski eziqhelekileyo?
Ngoku iimaski ezikhankanywa rhoqo zibandakanya i-KN95, i-N95, iimaski zoqhaqho zonyango njalo njalo.
Eyokuqala ziimaski zeKN95. Ngokokuhlelwa komgangatho kazwelonke we-GB2626-2006 "Izixhobo zokuphefumla ezikhuselekileyo zokucoca ulwelo-uhlobo lokucoca ukuphefumla", iimaski zahlulwe zaziKN kunye neKP ngokwenqanaba lokusebenza kwecandelo lokucoca ulwelo. Uhlobo lwe-KP lulungele ukuhluza amasuntswana aneoyile, kunye nohlobo lweKN lufanelekile ukuhluza amasuntswana angenamafutha. Phakathi kwazo, xa imaski ye-KN95 ifunyenwe ngamasuntswana e-sodium chloride, ukusebenza kwayo kokucoca kufanele kube ngaphezulu okanye kulingana ne-95%, oko kukuthi, ukusebenza ngokuhluza kwamasuntswana angenawo i-oyile ngaphezulu kwe-0.075 microns kungaphezulu okanye kulingana ne-95%.
Imaski ye-N95 yenye yeemaski ezisithoba ezikhuselekileyo eziqinisekiswe yi-NIOSH (iZiko leLizwe lezoKhuseleko eMsebenzini kunye neMpilo). “N” kuthetha ukunganyangeki kwioyile. "I-95" ithetha ukuba xa ifunyenwe kwinani elithile leengqungquthela ezithile zokuvavanya, ukuxinwa kweengqungquthela ngaphakathi kwimaski kungaphezulu kwama-95% ngaphantsi kweengqungquthela zengqungquthela ngaphandle kwemaski.
Ngaba ikhona imaski kwi- "Pin Word Mark"?
Nge-9 ka-Novemba ngo-2018, i-T / ZZB 0739-2018 "Isiphefumli seFutha seoyile eQhelekileyo" esaphuhliswa nguJiande Chaomei Daily Chemical Co, Ltd. ikhutshwe nguMbutho woLwakhiwo lweBrand yaseZhejiang.
Ezona zikhombisi ziphambili zalo mgangatho zisetwe ngokweempawu zokusebenza kwemveliso, jonga kwi-GB / T 32610-2016 "Ukucaciswa kwezobuchwephesha kwiiMaski zoKhuselo zemihla ngemihla", kudityaniswe ne-GB2626-2006 "I-Self-priming Filtered Particle Respirators", GB19083-2010 " Imigangatho yoKhuselo lwezoNyango efana neMaski, i-US NIOSH "iimaski zokuzikhusela" kunye ne-European Union EN149 "iimaski zokuzikhusela" zisetyenziswa ikakhulu kwimimandla yokhuseleko lokuphefumla ngokunxibelelana neendawo ezinamafutha aphezulu (ezinje ngamakhitshi kunye nemeko zebhayoloji). Umgangatho uchaza ukuba ukusebenza ngokuhluza kwamasuntswana aneoyile kungaphezulu kwe-90%, kwaye izalathi ezishiyekileyo zixhomekeke ekufezekiseni imigangatho ye-A yeemaski zoluntu kunye nemigangatho yeemaski zokukhusela abasebenzi eYurophu naseMelika, kwaye beka phambili iimfuno eziphezulu zokuvuza, ukumelana nokuphefumla, izikhombisi ze-microbial, kunye ne-pH. Yongeze imfuno yokulibaziseka kwesalathiso sehypersensitivity.
Zininzi iimaski zokukhusela ezinamaqhekeza angenawo ioyile kwi-KN90. I-KP-uhlobo lweemaski zokuzikhusela zihlala zinokuxhathisa okuphezulu kakhulu, kwaye i-aesthetics kunye nokuthuthuzela kwazo zombini yimigangatho yemaski yokukhusela, ekunzima ukuhlangabezana neemfuno zemihla ngemihla zabantu.
Ukuyilwa kwemigangatho yeemaski zemfesane yeoyile yoluntu kudlale indima entle kwimpilo yabantu. Uninzi lwabasebenzi basekhitshini, ukwenziwa kwalo mgangatho kunceda ekukhetheni izixhobo ezifanelekileyo zokukhusela imeko yabo yokusebenza.
Emva koko kukho iimaski zonyango. Ngokwenkcazo ye-YY 0469-2004 "Iimfuno zobuchwephesha zoMaski zoNyango lwezoNyango", iimaski zoqhaqho zonyango "zinxitywa ngabasebenzi bezonyango kwindawo yokusebenza engalunganga, ukubonelela ngokhuseleko kwizigulana ezinyangwa kunye nabasebenzi bezonyango abasebenza ngokungafunekiyo, kunye nokukhusela Iimaski zoqhaqho ezisasazwa ngegazi, ulwelo lomzimba kunye nokutshiza yimaski enxitywa ngabezonyango emsebenzini. ” Olu hlobo lwesigqumathelo lusetyenziswa kwiindawo zonyango njengezonyango zezigulana ezingalaliswayo, iilebhu, kunye namagumbi okusebenza, kwaye yahlulwe yangumaleko wokungena manzi, umaleko wokucoca ulwelo, kunye nomaleko wentuthuzelo ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi.
Ukhetho lobunzululwazi beemaski
Iingcali zithe ukongeza ekunikezeleni ngokhuseleko olusebenzayo, ukunxiba iimaski kufuneka kwakhona kuthathele ingqalelo intuthuzelo yalowo uyinxibileyo kwaye kungazisi ziphumo zibi njengezinto eziphilayo. Ngokubanzi, kokukhona ukwanda kokusebenza kokukhusela kwimaski, kokukhona kuya kuba nefuthe elikhulu kwintsebenzo yentuthuzelo. Xa abantu benxibe imaski kwaye bephefumla, imaski inokuchasana nokuhamba komoya. Xa uxhathiso lwe-inhalation lukhulu kakhulu, abanye abantu baya kuziva isiyezi, ukuqina kwesifuba kunye nokunye ukungonwabi.
Abantu abahlukeneyo banamashishini ahlukeneyo kunye nokuma komzimba, ke baneemfuno ezahlukeneyo zokutywina, ukhuseleko, intuthuzelo kunye nokuziqhelanisa neemaski. Abanye abantu abakhethekileyo, njengabantwana, abantu abadala, kunye nabantu abanesifo sokuphefumla kunye nezifo zentliziyo, kufuneka bakhethe ngononophelo uhlobo lweemaski. Kwinqanaba lokuqinisekisa ukhuseleko, thintela iingozi ezinje ngehypoxia kunye nesiyezi xa uzinxiba ixesha elide.
Okokugqibela, khumbuza wonke umntu ukuba nokuba zithini iimaski, kufuneka ziphathwe ngokufanelekileyo emva kokusetyenziswa ukunqanda ukuba ngumthombo omtsha wosulelo. Ngokwesiqhelo lungisa iimaski ezimbalwa ngakumbi kwaye ubeke endaweni yazo ngexesha lokwakha umgca wokuqala wokhuselo kukhuseleko lwempilo. Ndinqwenela nonke impilo entle!
Jiande Chaomei yemihla ngemihla Chemical Co., Ltd. yasekwa ngo-1996 Le nkampani ishishini eliphezulu-zobugcisa egxile kuphando kunye nophuhliso kunye nokuveliswa kweemveliso zokhuselo zokuphefumla. Ikwangumgangatho wokuqala wasekhaya wokuqala wobuchwephesha obunobungqina bothuli-ubungqina be-PPE yomenzi weemaski. , Ngaba yenye yeenkampani zokuqala zasekhaya ezibandakanyekileyo kule nkalo. Inkampani inendawo yokwakha yeemitha zesikwere ezingama-42,000. Okwangoku, le nkampani inesakhono semveliso esingaphezulu kwezigidi ezingama-400 zeemaski zobungcali. Ngo-2003, ngokwemiyalelo yeKhomishini yoPhuculo noHlaziyo yeSizwe, uMntla Korea wabonelela ngokhuseleko kwisibhedlele iBeijing Xiaotangshan, isibhedlele i-Ditan, isibhedlele i-Beijing Infectious Disease Hospital, iSebe lezoPhuhliso le-PLA, 302 kunye ne-309 Izibhedlele zobuhlobo zase China-Japan kunye ne-National. Imaski yeZibonelelo eziNgxamisekileyo "SARS" iimaski
Ukuze ulwe nolu hlobo lutsha lwe-coronavirus pneumonia, i-North Korea kunye ne-United States ngokungxamisekileyo bakhumbula abasebenzi ababangqongileyo ngemivuzo yabo kathathu ukubonelela ngesiqinisekiso esinamandla kakhulu sabalwi abalwa ngaphambili. Kwanconywa ziintloko zeCCTV News Network!
Ukuncoma ishishini elinophawu `` lophawu lwentengiso '', kunye nokuvuya kwabalwi abasokolayo ngaphambili. Abantu belizwe bayomeleza ukuzithemba kwabo, bancedane, badibanise abantu bonke, bathintele kwaye balawule lo bhubhane. Siza kuliphumelela eli dabi silwa nalo bhubhane.
Kutshanje, iZhejiang Provincial Institute of Standardization ikhawuleze yahlola ngaphezulu kwe-20 yamazwe aphesheya, eyangaphandle, yesizwe, eyeshishini kunye nemigangatho yendawo ngeemfuno zokuthintela ubhubhane kunye nemigangatho yolawulo ejikeleze iimaski zokhuselo zonyango, iimpahla zokhuselo zonyango, izixhobo zokhuselo zonyango, njl. ukuthengwa nokungeniswa elizweni Kuye kwaneenkampani ezikhokeleyo ekuveliseni iimaski kunye nezinye iimveliso ezinxulumene nokukhusela ukubonelela ngenkxaso yobuchwephesha esemgangathweni, ngokukunceda ukunceda ukuphucula umgangatho wokuthintela ubhubhane kunye neemveliso zolawulo, nokusombulula ingxaki yokunqongophala koncedo lwezonyango.
Ixesha lokuposa: Aug-31-2020
Ilali yaseShangshan, iYangcunqiao Idolophu, iSixeko saseJiande, iHangzhou, kwiPhondo laseZhejiang, China
Imbali yeNkampani yeCM Mask